कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन : नेतृत्वका लागि १० जना आकांक्षी, गुटभित्र नै फुटको राजनीति – Himalitimes
२०७७ आश्विन ८ ०६:५६ मा प्रकाशित
‘मेरो तयारी सभापतिमा नै हो, मेरै नाममा सहमति हुन्छ, त्यो प्रयास भइरहेको छ,’ नेता श्रेष्ठले राजधानीको जिज्ञासामा भने ।यसैगरी संस्थापन समूहकै नेता तथा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत आफूलाई पार्टी नेतृत्वका लागि दाबी अघि सारी सकेका छन् ।
उनले सभापति देउवालाई भेटेरै आगामी महाधिवेशनमा आफू नेतृत्वका लागि तयार रहेको भन्दै सघाउन भनिसकेका छन् । उनले महामन्त्री शशांक कोइरालालाई समेत सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेका छन् ।
‘निधिजीले सभापतिलाई भेटेरै नेतृत्वका लागि सघाउन भनिसक्नुभएको छ, उहाँ अब सभापति देउवाको समर्थन लिने कोसिसमा हुनुहुन्छ । उहाँ अब पछि हट्ने उम्मेदवार होइन,’ निधि निकट एक नेताले राजधानीसँग भने ।
यस्तै, संस्थापन इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आफू तयार रहेको सन्देश नेता कार्यकर्तालाई दिँदै आइरहेका छन् ।
सो समूहबाट कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंहले समेत सभापतिमा आफूलाई अघि सारेका छन् । नेता सिंहले आफू देशभरको नेतकार्यकर्ताको चाहनाअनुसार नै पार्टी नेतृत्वका लागि अघि बढेको बताए ।
‘देशभरका नेता कार्यकर्ता साथीहरूको राय र सुझावअनुसार मैले आफूलाई अघि बढाएको हुँ, पार्टीलाई नयाँ शैलीबाट अघि बढाउन र देशको नेतृत्व नै कांग्रेसको काँधमा ल्याउने गरी म अगाडि बढेको छु,’ कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिंहले राजधानीसँग भने ।
संस्थापनइतर समूहबाटै हालका महामन्त्री डा. शशांकको समेत पार्टी नेतृत्वका लागि तयारी तीव्र छ । उनले पनि आफू आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि अघि बढिसकेको पटक पटक बताइसकेका छन् ।
यसैगरी नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आफूलाई अघि बढाइरहेका छन् । उनी सकेसम्म इतर पक्षबाट आफूलाई एक्लो उम्मेदवार बनाउन प्रयासरत छन् ।
सो समूहबाटै नेता अर्जुननरसिंह केसीले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि तयारी अघि बढाएका छन् । उनले पार्टीमा नेताभन्दा नीति र विधि विधानको पालनामा जोड दिँदै नेताकार्यकर्तालाई एकीकृत गर्दै अघि बढेका छन् ।
‘मेरो प्राथमिकता र विचार भनेको नेताभन्दा नीति र विधि विधान प्रधान हो भन्ने हो, म त्यसैअनुसार आफूलाई अघि बढाउँदै हिँडेको छु । त्यहीअनुसार नेतृत्वका लागि मेरो तयारी छ,’ नेता केसीले भने ।
यसैगरी तेस्रो धारबाट नेता सिटौलाले पनि आफू पार्टी नेतृत्वका लागि तयार रहेको सन्देश पहिले नै दिइसकेका छन । उनले १३औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा केही समयअघि भएको एक कार्यक्रममार्फत आफू पार्टी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रने बताएका थिए ।
सोही समूहबाट यूवा नेता गगन थापाले समेत पार्टी नेतृत्वका लागि आफूलाई अघि बढाइरहेका छन् । उनले पार्टीलाई नयाँ रूप र जीवन दिन आफू तयार रहेको भन्दै विभिन्न कार्यक्रममार्फत सन्देश दिँदै आइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
नर्सहरुमाथिको अत्याचार : पढाइ खर्च १० लाख, पारिश्रमिक १० हजार !